သံလိုက်ကျောက်များ- ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အမျိုးအစားများနှင့် အရေးပါမှု | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 29/11/2021 17:28 | ဘူမိဗေဒ
အ သံလိုက်ကျောက်များ ကျောက်တုံးများ၏ သံလိုက်ဓာတ်သည် သံလိုက်ဓာတ် ဘူမိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာရေး နည်းလမ်းများကို နားလည်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသော သတ္တုဓာတ်များ၏ သံလိုက်ဓာတ်နှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ကျောက်သားဖွဲ့စည်းသည့်သတ္တုအများစုသည် သံလိုက်ဓာတ်ခံနိုင်ရည်အလွန်နည်းပြီး ကျောက်သားများတွင် သံလိုက်ဓာတ်ရှိရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ ၎င်းတို့တွင်ပါရှိသော သံလိုက်ဓာတ်များ၏အချိုးအစားသည် များသောအားဖြင့် သေးငယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘူမိဓာတုအုပ်စုနှစ်စုက ကျောက်တုံးများကို ဤသတ္တုဓာတ်နှင့် သံလိုက်ဓာတ်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် သံလိုက်ကျောက်များနှင့် သတ္တုတွင်းထွက် သံလိုက်ဓာတ်များ၏ လက္ခဏာရပ်များအကြောင်း သိလိုသမျှကို ပြောပြပါမည်။
1 သံလိုက်ကျောက်ဆိုတာ ဘာလဲ။
3 သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် အရေးပါမှု
သံ-တိုက်တေနီယမ်-အောက်ဆီဂျင်အုပ်စုတွင် သံလိုက်ဓာတ်သတ္တုများစွာ၏ အစိုင်အခဲဖြေရှင်းနည်းများ တွင် magnetite (Fe3O4) မှ ulvöspinel (Fe2TiO4) အထိ ရှိပါသည်။ နောက်ထပ် အသုံးများသော သံအောက်ဆိုဒ် ဟေမတက် (Fe2O3) သည် ဆန့်ကျင်ဖက်ရိုသံလိုက်သံလိုက် ဖြစ်သောကြောင့် သံလိုက် ပုံမမှန်မှုများ မဖြစ်စေပါ။ သံ-ဆာလဖာအခြေခံသည် သံလိုက်ဓာတ်သတ္တု pyrrhotite (FeS1 + x, 0) ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Curie အပူချိန် 578°C ရှိသည်။
ကျောက်တွင်းရှိ သံလိုက်အမှုန်များ၏ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ၎င်း၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကို သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း ၎င်း၏ အလုံးစုံ သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကျောက်၏ သံလိုက်အပြုအမူကို အမျိုးအစားခွဲခြားရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။
၎င်းတို့၏ Magnetite ပါဝင်မှုအတော်လေးမြင့်မားသောကြောင့် အခြေခံမီးသင့်ကျောက်များသည် သံလိုက်ကျောက်များဖြစ်လေ့ရှိသည်။ မီးသင့်ကျောက်များတွင် သံလိုက်ဓာတ်အချိုးအစားသည် အက်စစ်ဓာတ်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားသည်၊ ထို့ကြောင့် အက်စစ်ဓာတ်ရှိသော မီးသင့်ကျောက်များတွင် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ ကွဲပြားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများသည် အခြေခံကျောက်များထက် နည်းပါးလေ့ရှိပါသည်။
အသွင်ပြောင်းကျောက်များ၏ သံလိုက်ဝိသေသများသည်လည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖိအားနည်းနေပါက၊ မက်ဂနစ်ကို ပြန်လည်စုပ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး သံနှင့် အောက်ဆီဂျင်သည် အသွင်ကူးပြောင်းမှုအဆင့်များ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ သံနှင့် အောက်ဆီဂျင်တို့သည် အခြားသောတွင်းထွက်အဆင့်များနှင့် ပေါင်းစပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အောက်ဆီဂျင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအားသည် အလွန်မြင့်မားသော အသွင်ပြောင်းတုံ့ပြန်မှုတွင် အရန်ဓာတ်သတ္တုတစ်ခုအနေဖြင့် ပြုမူသော magnetite များဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် ကျောက်တုံးများ၏ သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်မှုနှင့် သံလိုက်ခံနိုင်ရည်တို့သည် ကျယ်ပြန့်စွာ ကွဲပြားကြပြီး မတူညီသော ဘာသာဗေဒများကြားတွင် သိသိသာသာ ထပ်နေပါသည်။ ဘယ်တော့လဲ သံလိုက်ကွဲလွဲချက်များကို အနည်အနှစ်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသောနေရာများတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ကွဲလွဲချက်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် မီးသင့်ကျောက်များ သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းမြေအောက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော အနည်အနှစ်များကြောင့် ဖြစ်ရသည်။
သံလိုက်ကွဲလွဲမှုများ၏ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများတွင် ချော်ရည်များ၊ ချို့ယွင်းချက်များ၊ အခေါက်များ သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်မှုများနှင့် ချော်ရည်များ စီးဆင်းမှု၊ အခြေခံ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု အများအပြား၊ အသွင်ပြောင်းမြေအောက်ခန်း ကျောက်တုံးများနှင့် သံလိုက်သတ္တုရိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ သံလိုက်ကွဲလွဲမှု၏ပြင်းအားသည် နက်ရှိုင်းသောအသွင်ပြောင်းမြေအောက်ခန်းရှိ ဆယ်ဂဏန်းမှ nT မှ ရာနှင့်ချီသောအခြေခံထိစပ်သောကိုယ်ခန္ဓာတွင် nT အထိရှိပြီး magnetite သတ္တုများ၏ပြင်းအားသည် ထောင်ပေါင်းများစွာ nT အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
ဒေတာစုဆောင်းမှု သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက် ယခုအချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာမြေ၏ lithospheric သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအမြင့်ဆုံး အာကာသမြေပုံ။ ဒေတာအတွဲသည် ESA ၏ Swarm ဂြိုလ်တုမှ တိုင်းတာမှုရလဒ်များကို ဂျာမန် CHAMP ဂြိုလ်တုမှ သမိုင်းအချက်အလက်နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် မော်ဒယ်လ်နည်းပညာအသစ်ကို အသုံးပြုထားပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များအား ကမ္ဘာ၏ အပြင်ဘက်အလွှာများမှ သံလိုက်အချက်ပြမှုများကို ထုတ်ယူနိုင်စေပါသည်။ အနီရောင်သည် lithospheric သံလိုက်စက်ကွင်း အပြုသဘောဆောင်သည့်နေရာများကို ကိုယ်စားပြုပြီး အပြာရောင်သည် lithospheric သံလိုက်စက်ကွင်းအနှုတ်ရှိသောနေရာများကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ESA ၏ Swarm မစ်ရှင်ခေါင်းဆောင် Rune Floberghagen က "ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်ကြယ်ပွင့်၏အပေါ်ယံလွှာကိုနားလည်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်သမိုင်းကို တိုင်းတာရန် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးရှင်းစွာအသုံးမပြုနိုင်ပါ။. ကျွန်ုပ်တို့ဂြိုဟ်၏ တောင့်တင်းသောအခွံ၏ သံလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံဖော်ပြချက်ဖြစ်သောကြောင့် အာကာသမှတိုင်းတာမှုများသည် အလွန်တန်ဖိုးရှိပါသည်။
ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ကနေဒါနိုင်ငံရှိ Swarm Science Conference တွင်၊ မြေပုံအသစ်သည် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ရှိ ဘူမိဗေဒဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ယခင်ဂြိုလ်တုအခြေခံ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုများထက် ပိုမိုတိကျသော နယ်ပယ်တွင် အသေးစိတ်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြသခဲ့သည်။
သံလိုက်စက်ကွင်းသည် သိသိသာသာ ထက်မြက်ပြီး ပိုမိုအားကောင်းသည့် Bangui ကို ဗဟိုပြုသည့် ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံတွင် ကွဲလွဲချက်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဒီလိုကွဲလွဲမှုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ကတော့ ဒါဟာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း 540 ကျော်က ဥက္ကာခဲများ၏ ရိုက်ခတ်မှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
သံလိုက်စက်ကွင်းသည် အမြဲတမ်း flux ၏အခြေအနေတွင်ရှိသည်။ သံလိုက်သည် မြောက်ဘက်ရွေ့လျားပြီး ဝင်ရိုးစွန်းသည် နှစ်သိန်းအနည်းငယ်တိုင်းတွင် ရွေ့လျားသောကြောင့် အိမ်မြှောင်သည် မြောက်ဘက်အစား တောင်ဘက်သို့ ညွှန်သည်။
မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် အပေါ်ယံလွှာအသစ်များထွက်လာသောအခါတွင်၊ အဓိကအားဖြင့် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တစ်လျှောက်တွင် သံဓာတ်ကြွယ်ဝသော သတ္တုဓာတ်များသည် သံလိုက်ဓာတ်မြောက်ဘက်သို့ မျက်နှာမူပြီး ကျောက်သားအေးသွားသောအခါ တွေ့ရှိရသည့် သံလိုက်စက်ကွင်း၏ "လျှပ်တစ်ပြက်" ကို ဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သံလိုက်ဝင်ရိုးများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ခိုင်မာသောသတ္တုဓာတ်များသည် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တွင် 'အစွန်းအထင်းများ' ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကမ္ဘာ၏ သံလိုက်ဓာတ်သမိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ပေးသည်. Swarm ၏နောက်ဆုံးပေါ်မြေပုံသည် သမုဒ္ဒရာအလယ်ခေါင်မှ သမုဒ္ဒရာအလယ်ခေါင်မှ ထင်ဟပ်နေသည့် ပန်းကန်ပြားနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဖဲကြိုးများအကြောင်း မကြုံစဖူး ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည်။
“ဤသံလိုက်ကြိုးများသည် သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းကို ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း၏ အထောက်အထားများဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိ သံလိုက်ခြေရာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် အူတိုင်၏ သံလိုက်စက်ကွင်းတွင် ယခင်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပန်းကန်လုံးထုများကို လေ့လာရာတွင်လည်း ကူညီပေးသည်” ဟု Kentucky တက္ကသိုလ်မှ Dhananjay Ravat က ပြောကြားခဲ့သည်။
မြေပုံအသစ်သည် သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကို သတ်မှတ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ကီလိုမီတာ 250 အထိ ရှည်လျားပြီး ကမ္ဘာမြေ၏ lithosphere ၏ ဘူမိဗေဒနှင့် အပူချိန်တို့ကို စုံစမ်းရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။
သံလိုက်ကျောက်တုံးများသည်လည်း သံလိုက်ကျောက်ဆောင်များ၏ အမြင်တွင် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင် မြေကြီးအတွင်း၌ သံပမာဏများစွာ ရှိနေကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် သံလိုက်ကျောက်များ၊ ၎င်းတို့၏ အရေးပါမှုနှင့် ကမ္ဘာ၏ သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » သံလိုက်ကျောက်များ